Fanontaniana momba ny marketing amin'ny atiny mba hapetraka sy hamaly | Martech Zone
Fanontaniana momba ny varotra atiny mba hapetraka sy hamaly
Alatsinainy Desambra 2, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity infographic avy amin'ny AboutUs ity dia topy topimaso amin'ny fanontaniana mila apetraka amin'ny maha mpivarotra atiny anay. Raha ny momba an'ity lahatsoratra ity dia valiako toy izao manaraka izao ireto fanontaniana ireto:
Iza - ny tanjonay dia mpivarotra atiny vaovao sy mpanelanelana.
Inona - Ity infographic ity amin'ny fanontaniana fototra tokony hamaly ny marketing-nao.
Aiza - Hamoaka ny sary eto izahay ary hizara izany amin'ny fantsona sosialy rehetra, ao anatin'izany Pinterest ary StumbleUpon.
Rehefa - Tianay ny hamoaka amin'ny misasakalina mba hifandraisana amin'ny mpamaky marobe manerana ny firenena.
Nahoana - Ny tranokalanay dia fantatra amin'ny fizarana infografika marketing lehibe ary nanjary toerana maro karazana ho azy ireo.
Ahoana - Ny fizarana an'ity sary ity avy amin'ny AboutUs dia manome ny mpivarotra atiny hanana rafitra lehibe hampivelarana ny paikadin'izy ireo. Hifindra any amin'ny Dingana 7 amin'ny fanatsarana ny atiny manaraka hamolavola drafitra ankapobeny!
Tags: momba anayatiny mahasarikainfographic atinyContent Marketinginfographic marketing amin'ny atinyAhoana nomarketing infographicinonarahovianaizayizayNahoana
Dingana 7 ho an'ny paikadim-barotra momba ny varotra Optimised
Poken: fampiroboroboana tamba-jotra amin'ny hetsika ara-orinasa
Sep 1, 2014 ao amin'ny 3: PM PM
Saika hiady hevitra aho fa ny dingana farany (tena hamelezana ity iray ity hiala ny valan-javaboary) dia ny firesahana amin'ny olona 1-1 mba tena hampidina ny ambany. Ny namako dia nanao an'io niaraka tamin'i Matthew Bucher - izay nanangana masoivoho fitantanana fahombiazana mahomby hatrany ifotony